I-China yokutshintsha i-ROKU iWi-Fi yelizwi lolawulo olukude kunye nomzi mveliso | Yangkai
Ukutshintsha iROKU yeWi-Fi kwilizwi lolawulo olukude
Ikhowudi yemveliso: YKR-059
Ifaka endaweni yeROKU ilizwi eliluhlaza-izinyo lolawulo kude.
Suit for I-Roku Express, iRoku yokusasaza i-Stick, iRoku Premiere, iRoku Ultra, iRoku 2, iRoku 3 kunye neRoku 4.
Ukude kwasekuqaleniumgangatho. Inye enye.
Imvakalelo efanelekileyo yokubamba.
ROKU ulawulo olukude:
Ngokunikwa isixhobo sakho seRoku esiqhagamshelwe kumandla kwaye sinikwe amandla, uya kukhokelwa ngenkqubo yokuseta. Okungakumbi, kuya kucelwa ukuba uqhagamshele intonga okanye ibhokisi kwi-intanethi.
Ukuseta i Iibhokisi zeRoku / IiTVUya kucelwa ukuba ukhethe i-Wired okanye i-Wireless ukunxibelelana nomzila kunye ne-intanethi
Ukhetho olunentambo aluyi kuvela kwi-Roku Streaming Sticks.
Ukuba ukhetha i-Wired, nceda ukhumbule ukuqhagamshela ibhokisi yakho yeRoku okanye iTV kumzila wakho usebenzisa intambo ye-Ethernet. Isixhobo seRoku siza kuqhagamshela ngqo kwinethiwekhi yakho yasekhaya nakwi-intanethi. Emva kokuqinisekiswa, ungaqhubeka ngamanyathelo okuseta aseleyo esixhobo seRoku. Ukuba ukhetha i-Wireless, kufuneka amanyathelo ongezelelweyo ukugcwalisa inkqubo yoqhagamshelo ngaphambi kokuba uqhubele phambili kumanyathelo okuseta esixhobo seRoku.
Ukuba lixesha lokuqala ukuseta uqhagamshelo ngaphandle kwamacingo, isixhobo seRoku siza kujonga ngokuzenzekelayo naziphi na iinethiwekhi ezikhoyo ngaphakathi kuluhlu.
Ukuba uluhlu lweenethiwekhi ezikhoyo luyavela, khetha inethiwekhi yakho ngaphandle kwamacingo kuluhlu.
Ukuba awukwazi ukufumana inethiwekhi yakho yasekhaya, khetha u-Scan kwakhona de ivele kuluhlu olulandelayo.
Ukuba akuphumelelanga ukufumana uthungelwano lwakho, iRoku kunye nomzila kunokuba kude kakhulu. Ukuba unakho ukuqhagamshela kwi-router yakho usebenzisa enye umnatha, eso sesinye sezisombululo. Isisombululo sesibini kukuhambisa isixhobo seRoku kunye ne-router sisondelelene kunye okanye ukongeza i-extender range extender.
Nje ukuba uthathe isigqibo senethiwekhi yakho, iya kujonga ukuba ngaba iWi-Fi kunye nonxibelelwano lwe-intanethi zisebenza ngokufanelekileyo. Ukuba ewe, ungaqhubeka. Ukuba akunjalo, kufuneka ukhangele ukuba ingaba ukhethe i-network eyiyo.
Nje ukuba iRoku iqhagamshelwe kwinethiwekhi yakho, kuya kufuneka ufake ipaswedi yenethiwekhi. Emva koko, khetha Qhagamshela. Ukuba iphasiwedi ingeniswe ngokuchanekileyo, uza kubona isiqinisekiso esichaza ukuba isixhobo seRoku sixhume kunethiwekhi yakho yasekhaya nakwi-intanethi.
Nje ukuba uqhagamshele, isixhobo seRoku siya kukhangela ngokuzenzekelayo naziphi na izinto ezikhoyo ze-firmware / zesoftware. Ukuba kukho nayiphi na efumanekayo, iya kuyikhuphela kwaye ifake.
Nceda uqaphele ukuba isixhobo seRoku sinokufuna ukuqala kwakhona / ukuqala kwakhona ekupheleni kwesoftware / inkqubo yokuhlaziya i-firmware.
Linda ide igqitywe le nkqubo. Emva koko, ungaqhubela phambili kumanyathelo okuseta ongezelelweyo okanye ukujonga.
Qhagamshela iRoku kwiWi-Fi emva kokuCwangciswa kwexesha lokuqala
Ukuba unenjongo yokuqhagamshela iRoku kwinethiwekhi entsha yeWi-Fi, okanye utshintshe ukusuka kwinethiwekhi ukuya kwiNethiwekhi engenazingcingo, nceda ubone amanyathelo asebenzayo:
Cinezela i Ekhaya iqhosha kude.
2.Khetha Useto > Inethiwekhi kwimenyu ekwisikrini seRoku.
3.Khetha Cwangcisa Unxibelelwano (Njengoko bekutshiwo ngaphambili).
4.Khetha Ngaphandle kwamacingo (ukuba zombini Intambo kwaye Ngaphandle kwamacingo iinketho ezikhoyo).
5.Roku kuthatha ixesha ukufumana inethiwekhi yakho.
6 Faka iphasiwedi yakho yenethiwekhi kwaye ulinde isiqinisekiso soqhagamshelo.
Qhagamshela iRoku kwiWi-Fi kwiDorm okanye kwihotele
I-Roku inento entle onokuhamba ngayo ngentonga yakho yokusasaza okanye ibhokisi kwaye uyisebenzise kwihotele okanye kwigumbi lokulala.
Ngaphambi kokupakisha iRoku yakho ukuze uyisebenzise kwenye indawo, qiniseka ukuba indawo ibonelela ngeWi-Fi kwaye iTV oyisebenzisayo inonxibelelwano lwe-HDMI onokufikelela kulo kulawulo lweTV.
Ungadinga ulwazi lwakho lokungena kwiAkhawunti yeRoku, nceda ulungiselele kwangaphambili.
Nje ukuba ukulungele ukusebenzisa iRoku, landela la manyathelo alandelayo:
1 Fumana iphasiwedi yenethiwekhi yendawo.
2.Qhagamshela intonga yakho yeRoku okanye ibhokisi yamandla kunye neTV ekufuneka uyisebenzisile.
3. Cinezela iqhosha lasekhaya kwi-Roku kude.
4.Yiya kuseto> Inethiwekhi> Cwangcisa unxibelelwano.
Nceda ukhethe i-Wireless.
Nje ukuba uqhagamshelo lwenethiwekhi lusekwe, nceda ukhethe ukuba ndisehotele okanye edolophini yekholeji. Iimpawu zesixhobo sakho seRoku kunye nomxholo osithandayo wokuhambisa.
I-ABS / i-ABS entsha / iPC ebonakalayo
Ukungena manzi / iWi-Fi
I-Roku Express, iRoku yokusasaza intonga,
Inkulumbuso yeRoku, Roku Ultra, Roku 2, Roku 3 y Roku 4
ROKU / ngentando yakho
I-PCB + Irabha + yeplastiki + uShell + Intlakohlaza + ye-LED + IC + Resistance + Capacitance
100pc Carton nganye
Okulandelayo: Ulawulo lwe-Universal Remote (4 ngo-1)
SONY Ukutshintshwa kweLizwi eliBlue-izinyo kwilizwi elikude ...
Ukubuyiselwa kwe-LG Remote Remote AKB75095308 AKB7371560 ...
SONY Ukubuyisela IR Remote Control RMT-TX100D R ...
Ukutshintshwa kwe-LG yokuLawula i-IR kude kude AKB74115502
Ukutshintshwa kolawulo olukude lweVodafone IR